कुवेतलाई हराएर शीर्षमा उक्लिने नेपालकाे लक्ष्य - Jyotinews
कुवेतलाई हराएर शीर्षमा उक्लिने नेपालकाे लक्ष्य
ज्योतिन्यूज २०७८ मंसिर ८ गते १७:४७
काठमाडौं – पहिलो खेलमा हार र दोस्रो खेलमा जित निकालेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटको तेस्रो खेलमा बिहीबार कुवेतको सामना गर्दै छ ।
दुबईस्थित आईसीसी एकेडेमीको मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बिहान सवा ११ बजे सुरू हुनेछ । प्रतियोगितामा कुवेतविरुद्ध खेल्दै गर्दा नेपाल दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ । नेपाल कुवेतलाई सहज रूपमा हराउँदै नेट रनरेट बढाएर शीर्षस्थानमा पुग्ने दाउँमा हुनेछ ।
मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई आठ विकेटले जितेको थियो । सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल हङकङसँग ६ विकेटले हार्‍याे ।
यता, कुवेत भने प्रतियोगितामा पहिलो जितको खोजीमा छ । कुवेत दुवै खेलमा पराजित हुँदै तालिकाको पुछारमा छ । पहिलो खेलमा भुटानसँग ४० रनले पराजित कुवेत दोस्रो खेलमा मलेसियासँग ८१ रनले पराजित भएको थियो ।
तेस्रो खेलमा जित निकाल्दै नेपाल ग्लोबल छनोटको सम्भावना कायमै राख्न चाहन्छ । त्यसका लागि रुबिना क्षेत्रीकाे कप्तानीमा रहेकाे नेपाली टाेली तयार छ । ६ टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष टोली ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउनेछ ।
यसअघि नेपालले अन्तिम पटक सन् २०१९ मा भएको खेलमा कुवतेलाई ३० रनले पराजित गरेको थियो ।
यता बिहीबार एकै समयमा मलेसियाले हङकङसँग खेल्नेछ । प्रतियोगिताको चौथो खेलमा नेपालले शुक्रबार मलेसियाविरुद्ध र पाँचौँ खेलमा आइतबार संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई)विरुद्ध खेल्नेछ ।
जारी प्रतियोगितामा दुई खेलमा दुई नै जित निकालेको यूएई चार अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । नेपाल, मलेसिया, हङकङ र भुटानको समान चार अंक रहँदा नेट रनरेटका आधारमा क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा छन् । यता, बिनाअंक कुवेत पुछारमा छ ।
भारतमा थप ८ हजार ३०८ संक्रमित थपिए
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन हुन्छ–मन्त्री रेग्मी
१ करोड २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ
चितवनमा टिप्परको ठक्करले महिलाको मृत्यु
बंगालमा ‘जवाद’ सामुन्द्रिक आँधी, नेपालमा भाेलिबाट अर्काे माैसमी प्रणाली
प्रदेश २ बाहेकमा प्रदेश कार्यसमिति चयनका लागि आज मतदान हुँदै
कांग्रेस लुम्बिनी अधिवेशनः नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान
माैसममा क्रमश: सुधार हुने, आज यी क्षेत्रमा हिमपातकाे सम्भावना
राप्रपा महाधिवेशनः नयाँ नेतृत्वका लागि आज निर्वाचन हुँदै
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मतः कति आयो भोट ?
पूर्वसांसद फुयाँल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश
चितवनमा माधव नेपालले भने– एमाले नेताको सातो गइसक्यो, अब एमाले इतिहास बन्छ
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पाए विश्वासको मत, कति आयो भोट ?
महाधिवेशनको मुखमै अमर गिरीले छाडे एमाले